छोटकरीमा : आज - २०७७ असोज ३०, शुक्रबार
बिहीबार ४,३९२ जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १,२६,१३७ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ७१५ पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा ८८,०४० जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्।
=> PCR Tests Today: १६,५३१ => Recovered Today: ३,५२२
देशभरका संस्थागत आइसोलेसन १२ हजार ३३६ जना र होम आइसोलेसनमा २५ हजार ४६ जना रहेका छन् । आजसम्म देशभर चार हजार ८०८ जना क्‍वारेन्टिनमा रहेका छन् । देशभर ७७ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहको छ । देशभर ३१५ जना आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार चार सय दुईजना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौंमा एक हजार सात सय ८४, ललितपुर तीन सय ७४ र भक्तपुरमा दुई सय ४४ संक्रमित थपिएको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए ।
२४ घण्टामा ४३९२ कोरोना संक्रमित थपिए
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेकै व्यवस्थामा भगवान् शिव र ब्रह्माजी आए पनि पाँच लाख मेट्रिकटन मल ल्याउन सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार ४०औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले अहिले ल्याउन खोजिएको पाँच लाख मेट्रिकटन मल आजकै व्यवस्थाबाट तत्काल ल्याउन नसकिने बताएका हुन् ।
उनले तत्काल पाँच लाख मेट्रिकटन मल ल्याउन भगवान् शिव वा ब्रह्मा आए पनि नसक्ने टिप्पणी गरे ।
कृषिमन्त्री भुसाल भन्छन्– किसानलाई बैंकको ब्याज छुट दिनेबाहेक केही पनि गर्न सकिनँ
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बलात्कारी समूह (रेपर एसोशिएसन) बनाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बलात्कारी संगठन नामक पेज र समूह बनाउने नवीन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको हो ।
'बलात्कारी संगठन' नामक फेसबुक पेज चलाउने व्यक्ति पक्राउ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कोरोना लक्षण वा पोजिटिभ देखिए मात्र आइसोलेसन बस्न निर्देशन दिएको छ ।
फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना वा लक्षण भएमा मात्र आइसोलेसनमा बस्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बालिका बलात्कार र दलितमाथि भएको दमन रोक्न प्रहरी सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश २ मा बलात्कारसहित अन्य आपराधिक घटना मौलाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरीले अपराधीको मानसिकता नै परिवर्तन गर्ने समय आएको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादले पार्टीलाई राम्रो नगरेको बताएका छन् । कर्णालीबाट आएका नेताहरुसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले यस्तो बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका नेता यामलाल कँडेलले पार्टी एकतादेखि अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रको हस्तक्षेप मान्य नहुने पनि बताएका थिए ।
कँडेल समूहलाई दाहालको जवाफ– जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभएन
सरकारले गाउँमा नयाँ व्यक्ति आएका भए छिमेकीहरु मिलेर एक साता क्वारेन्टिनमा लगेर राखिदिन आग्रह गरेको छ । पीसीआर गर्न स्वाब दिएका व्यक्तिहरुलाई परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदासम्म घरमै बसिदिन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ ।
गाउँमा नयाँ व्यक्ति आए छिमेकी मिलेर एक साता क्‍वारेन्टिनमा राख्‍नुस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत कात्तिक १५ गतेसम्म बन्द हुने भएको छ । कात्तिक १ गते घटस्थापनाको दिनदेखि १५ गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म अदालत बन्द रहने सूचना जारी गरेर जानकारी गराइएका छ । दसैंका बेलामा सँधै यो अवधिमा अदालत बन्द हुने गर्दछ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भूमिगत समूह र गठबन्धनलाई निस्तेज पार्न कहीं पनि सम्झौता नगरी अगाडि बढ्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । ६५ औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली गर्ने र जनताको अधिकार प्रयोगबाट वञ्जित गराउने समूहलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने विश्वास लिएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
खनालले फेसबुक स्टाटस लेख्दै आफू अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बताएका हुन् । गत असोज २८ मा रक्तचाप बढेपछि नेता खनाल धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
झलनाथ खनाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
दसैं नजिकिएसँगै लगानीकर्ता बाहिरिँदा यो साता नेप्सेमा बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । यो साता बजार परसूचक नेप्से २७.१८ अंकले घटेर १५६२.४६ अंकमा बन्द भएको छ । नेप्सेसँगै यो साता कारोबार रकम पनि ३७.९७ प्रतिशते घटेको छ ।
नेपाल प्रहरीको ६५औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै बूढीगण्डकीमा अर्बौं भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा निराधार भएको बताए । ‘एउटा निर्णय नभएको, कसैले नलिएको कार्यारम्भ नभएको, हुन्छ हुँदैन भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेतले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोसमेत सुनेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी यस्ता गैरजिम्मेवार र निराधार अभिव्यक्तिको एउटा कुरा हो तर हामी त्यति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुन सक्दैनौं ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले नजिकिँदा दसैं, तिहार, छठ, चासोक तङ्नामजस्ता चाडपर्वमा हुने भीडभाडलाई लक्षित गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बढ्दो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा शुक्रबार निषेधाज्ञा जारी गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
सुनसरीमा चाडपर्व लक्षित भीडभाड रोक्न निषेधाज्ञा जारी
अल्फाबेट इंक गुगलले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मतदाताहरुलाई आफ्नो नजिकको मतदान केन्द्र पत्ता लगाउन सजिलोका लागि नयाँ फिचर ल्याएको छ । आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाताहरुलाई आफ्नो नजिकको मतदान स्थल पत्ता लगाउन सजिलोका लागि गुगलले आफ्नो सर्च इञ्‍जिन, नक्सा र भ्वाइसमा नयाँ फिचर ल्याएको जनाएको हो।
नजिकको मतदान केन्द्र पत्ता लगाउन गुगलको नयाँ फिचर
नेपालको सीमावर्ती भारतको राज्य बिहारमा यतिबेला चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । भारतको केन्द्रीय चुनाव आयोगले सेप्टेम्बर २५ मा राज्यमा विधानसभा चुनावको घोषणा गरेसँगै चुनावी माहोल तातेको हो । आयोगले बिहारको २४३ विधान सिटका लागि अक्टोबर २८, नोभेम्बर ३ र ७ का लागि मतदानको मिति तय गरिसकेको छ ।
डब्लूएचओले कोभिड-१९ का संक्रमितको उपचारमा प्रयोग भइरहेको रेम्डेसिभिर औषधि प्रभावकारी नभएको अथवा निकै न्युन प्रभावकारी भएको जनाएको छ। रेम्डेसिभिरको विकास इबोलाको उपचारको लागि गरिएको हो। यो एन्टिभाइरल औषधि हो र यसले शरीरमा भाइरसलाई बढ्न चाहिने एन्जाइमलाई निष्क्रिय बनाउँछ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेम्डेसिभिर खासै प्रभावकारी देखिएन : डब्लूएचओ
नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा राष्ट्रका मुद्दाहरुमा बहस गर्ने थलोका रुपमा संसद रहेन ? अंग्रेजी अखबार इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारअनुसार पछिल्ला ६ वर्षमा मोदीले संसदमा मात्र २२ पटक बोलेका छन् ।
क्रिस्टफ जाफरलु र विहांग जुमलेको संयुक्त बाइलाइनमा प्रकाशित लेखमा मोदी सरकार संसदलाई नजरअन्दाज गरिरहेको उल्लेख छ । लेखका अनुसार एचडी देवगौडा मात्र दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए, उनले पनि संसदमा मोदीभन्दा बढी पटक बोलेका थिए ।
नरेन्द्र मोदी ६ वर्षमा २२ पटक मात्रै संसदमा बोले
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले बुधबार अमेरिकी विदेश नीतिमा उल्लेखनीय सुधार एवम् परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग आवश्यक फोकस अनि धैर्यता नै नभएको बताएका हुन् । डेमोक्रेटका उमेदवार जो बाइडेनसँग चुनाव प्रचारको अन्तिम कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका ओबामाले आफ्नै राष्ट्रपति कालको समीक्षा गर्नुका साथै पार्टीलाई अझ प्रगतिशील बनाउन केही सुझावहरु पनि दिएका हुन् ।
दक्षिण भारतमा परेको मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । भारतका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको केन्द्र सहर हैदराबादमा वर्षाका कारण बाढी तथा डुबान भई एउटा पर्खाल भत्किँदा कम्तीमा नौजना र १० जना अन्य व्यक्तिको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले बताए ।